Xiisada Jigjigo oo kacsan, M/w Mustafa oo Moshin laga gudbiyay & Xildhibaano Xasanada laga qaaday - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Xiisada Jigjigo oo kacsan, M/w Mustafa oo Moshin laga gudbiyay & Xildhibaano...
Xiisada Jigjigo oo kacsan, M/w Mustafa oo Moshin laga gudbiyay & Xildhibaano Xasanada laga qaaday
Magaalada Jigjiga ee Xarunta Dowlad Deegaanka Soomaalida waxaa ka taagan Xiisad ka dhalatay Mooshin laga gudbiyay Madaxweyne Mustafe Muxumed Cagjar iyo Xildhibaanada qaar oo xasaanadda laga qaaday.
Xildhibaannada qaarkood ayaa sheegay in ay jirdil muuqda iyo mid gudaha ah u geysteen Ciidamada ammaanka Dowlad Deegaanka Soomaalida, sidaas awgeed waxa ay dalbadeen in wax laga qabto waxyeelada loo geystay.
Ciidamo badan ayaa la dhigay Waddooyinka muhiimka ee Jigjiga si ay uga hortagaan falcelinta Xildhibaannada careysan ee jirdilka u geysteen Ciidamada Ammaanka Dowlad Deegaanka Soomaalida.
Cabdiraxmaan Curaagte oo kamid ah Xildhibaanada Xasaanadda laga qaaday oo Warbaahinta la hadlay waxa ay sheegay in dacwad ay la tiigsanayaan Madaxda Dowlad Deegaanka oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Mustafa Cagjar.
Wasiirka Xafiiska Warfaafinta Dowlad Deegaanka Soomaalida Cali Badal ayaa difaacay go’aanka Xasaanadda looga qaaday 12-ka Xildhibaanno oo uu ku tilmaamay in ay sameynayeen falal ka dhan ah Dowlad Deegaanka.
Fardowsa Maxamed Guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka ahna ku simaha Guddoomiyaha waxa ay dhankeeda sheegtay in tallaabada Xasaanadda looga qaaday ay tahay mid looga hortagayo dhibaatooyin ay u geysteen Shaqaale Dowladood oo aan Xasaanad lahayn.
Xildhibaannada Xasaanadda laga qaaday ayaa kahor yimid go’aankaas, waxaana magacyadooda ay kala yihiin:
1-Maxamed Axmed Layli, 2-Axmed Aadan axmed, 3-Cabdiwali Axmed Faarax,4- Mahad Xasan Maxamed, 5-Shaafi Cashiir, 6-Nadiir Yuusuf Aadan, 7-Cabdirisaaq Cabdullaahi Belyi, 8-Yuusuf Cilmi Isaaq, 9-Axmed Xasan Nuur, 10-Yuusuf Axmed Xirsi, 11-Nimcaan Cabdullaahi Xamare iyo 12- Cabdiraxmaan Curaagte.
Previous articleAfhayeenka Madasha Xisbiyada Qaran oo sheegay in soomaaliya lasoo galiyay hub faro badan
Next articleMW Muuse Biixi . waxaan Maxkamada ICJ geeyn doona kiiska ictiraaf raadinta